Daraasaad Kusaabsan Dhanka Dalagyada Kaladuwan Ee ku Haboon Cimilada Deegaanka Oo Lagawado Beercaano - Cakaara News
Daraasaad Kusaabsan Dhanka Dalagyada Kaladuwan Ee ku Haboon Cimilada Deegaanka Oo Lagawado Beercaano
Beercaano (cakaarnews)Khamiis 22ka June 2017. Machadka cilmi baadhista DDSI ayaa daraasaadyo cilmiyaysan oo lagu darsayo Midho badinta dalagyadii horay loo tijaabiyay iyo waliba tijaabooyin cusub oo ku aadan abuurka dalagyada kaladuwan ee laqabsan kara cimilada deegaanka kawada mashruuca waraabka degmada beercaano.
Hadaba, Maareeyaha Machadka Cilmi Baadhista DDSI mudane Guuleed awcali kaahin oo u waramay warbaahinta degaanka ayaa sheegay in mudo 3 bilood ah uu machadku kawado daraasaadyo kaladuwan oo ku aadan dhanka dalagyada laqabsan kara cimilada deegaanka. wuxuuna xusay maareeyuhu in daraasaakan laga wado dhul beereedka degmada beercaano islamarkaana lagu gudajiiro tijaabooyinkii dalagyada kaladuwan ee sida bariiska, qamandida, sinsinta, iyo waliba noocyada khudaarta ee kala ah, canabaha, liinta, mawska iyo saytuunka. Maareeyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in tijaabadan ay isugujirto 2 nooc taasoo kala ah midhihii horay loo tijaabiyay oo midho badin lagu samaynayo iyo midho cusub oo si hor leh loo tijaabinayo islamarkaana lafilayo in lagu guulaysto. Wuxuuna tilmamay in waxyaabaha waawayn ee horumarka keeni kara ay yihiin in si cilmiyaysan looga faaiidasto waxsoosaarka isagoo tilmaamay in hada kahor masagadu ku bixi jirtay 6 bilood, hadana labeerto mid 3 bilood ku baxda, wakhti xaadirkana ay tijaabadeeda wadaan mid 2 bilood iyo 5 cisho kubaxda.
Wuxuuna carabka kudhuftay in natiijo wax ku ool ah ay kafilayaan daraasaadka iyo tijaabooyinkoodan ay kuwadaan waxsoosaarka dalagyada kaladuwan gaar ahaan tijaabooyinkan cusub ee lagu wado Canbaha oo 3 sano kudhalaya Muuska oo mudo sanad kayar kudhalaya cananis, liin-macaan, liin-dhanaan, muuska iyo waliba dhawr nooc oo calafka xoolaha ah oo uu kamid yahay elephant grass.
Ugudanbayna, gudoomiyaha degmada beercaano ayaa ku aamaanay daraasaadka ay wadaan machadka cilmi baadhistu islamarkaana ahmiyada baaladhan uleh dhamaan shacabwaynaha deegaanka. isagoo sheegay in tijaabooyinkan iyo daraasaayadan intooda badan lagu guulaystay kuwa cusubna laga filayo guulo waxku ool ah.